Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba Eziphambili zaseThailand » I-Bangkok ilungiselela intlekele enkulu yezikhukula
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Resorts • Xanduva • Safety • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Kusweleke abantu abasixhenxe kwaye ababini belahlekile ukusukela ngeCawe kwizikhukula ezibangelwe sisitshingitshane seTropical Dianmu.
Idolophu elikomkhulu laseThai iBangkok kunye nezinye iindawo zikhuphe isilumkiso esitsha malunga nezikhukula ezinokubakho.
Ukuza kuthi ga ngoku, abantu abasi-7 baswelekile kwaye i-2 ibilahlekile kwizikhukula ezinkulu ezihlasele iThailand ukusukela ngeCawa.
Irhuluneli yaseBangkok ivumile ukuba isixeko esisesichengeni sisengozini yezikhukula ezivela eChao Phraya.
EThailand ISebe lezoThintelo lweNtlekele kunye noNciphiso utshilo namhlanje ukuba abantu abasixhenxe babhubhile kwaye ababini abalahlekile ukusukela ngeCawe kwizikhukhula ezibangelwe sisitshingitshane seTropical Dianmu.
I-Alaska Airlines ityhila i-livery entsha ye-San Francisco Giants ngombhiyozo kwisikhululo senqwelomoya sase-San Francisco esine-mascot enkulu "uLou Seal"
thai abasemagunyeni ibhengeze ukuba amakhaya angama-197,795 kumaphondo angama-30, ubukhulu becala emantla, empuma mpuma nakwimimandla esembindini ichaphazele- ukonyuka kweepesenti ezingama-56 ngaphezulu kwe-126,781 eyaxelwa kusuku olungaphambili. Izimvula ezinkulu zisalindelwe kwiindawo ezininzi.
Ngoku, isixeko esilikomkhulu Bangkok kunye nezinye iindawo ezikumbindi weThailand zikhutshwe ngezilumkiso ezitsha malunga nezikhukula ezinokubakho, njengoko abasemagunyeni ngexesha lentlekele uthe isoyikiso siyehla kumaphondo ali-13 kwangama-30 kwenye indawo athe ahlaselwa yimvula yonyaka.
Amanzi amaninzi ahamba ezantsi eChao Phraya evela emantla aye awongamela amadama kunye namadama, kukhokelela kwizilumkiso kwangoko Bangkok kunye namaphondo eLopburi, Saraburi, Ayutthaya, Pathum Thani naseNonthaburi.
Bangkok Irhuluneli u-Aswin Kwanmuang uvumile namhlanje kuba ikomkhulu likumhlaba osemazantsi, lisengozini yezikhukula ezivela eChao Phraya, kwaye ayinakuphelelwa ngamanzi ngokukhawuleza. Iinxalenye zesixeko zazaliswa ngamanzi kwizikhukula ezinkulu zango-2011, zondliwa ikakhulu ngamanzi akhululwa kumadama angasentla.
Irhuluneli idwelise amanyathelo athatyathwa sisixeko ukumelana nezikhukula, kubandakanya nokulungiselela iimpompo zamanzi ezidibanisa itonela enkulu yokuhambisa amanzi.
Ngelixa amadama amakhulu kunye namachibi amakhulu emantla ukuza kuthi ga ngoku abe nakho ukumelana nemvula yalo nyaka, abanye abakufutshane neBangkok baye basondela okanye bagqitha kumthamo wabo kule nyanga kwaye kuye kwafuneka bakhuphe amanzi.